MacOS 10.13.1 hadda waa la heli karaa, sidoo kale iTunes 12.7.1 oo ku yaal Mac App Store | Waxaan ka socdaa mac
MacOS 10.13.1 hadda waa la heli karaa, sidoo kale iTunes 12.7.1 oo ku yaal Mac App Store
Dhowr daqiiqo, Apple ayaa soo saartay nooca ugu dambeeya ee macOS 10.13.1. Maanta waa maalin noocyo cusub, maxaa yeelay galabta waxaan aragnaa noocyada cusub ee dhammaan nidaamyada hawlgalka Apple. Midkii ugu dambeeyay ee la sii daayay wuxuu ahaa nooca loo yaqaan 'Mac'. Waxa ugu horreeya uguna muhiimsan ee noocyadan cusbooneysiinta ah ayaa ah in la xiro dhammaan dhibaatooyinka amni ee ay jabsadayaashu had iyo jeer helaan oo Apple ay si deg deg ah wax uga qabato marka ay xireyso. Si kastaba ha noqotee, iyadoo la cusbooneysiinayo isbuucyo ka hor, arrimaha badankood waxay ahayd in la xalliyo.
Laakiin intaas waxaa sii dheer, waxaan helnaa:
Emoji cusub, sidaa darteed isgaarsiinta ayaa ah wax aad u faa'iido badan.
Sixitaanka cayayaanka sababay ka go'ida Bluetooth, markii macaamil ganacsi lala sameynayay Apple Pay.
Waxay hagaajinaysaa isku halaynta fariin email u hagaagsan ku saabsan Microsoft Exchange.
Ugu dambeyntiina, kama aragno ugu yaraan xilligan qoraallada Apple, saxitaanka khalad leh badhanka dhawaaqa ee kumbuyuutarka Mac. Sida muuqata, adeegsadayaasha qaar ayaa ka cawday in Safari ay ka dhigtay wax aan macquul aheyn in la isticmaalo xakameynta mugga marka la beddelayo codsiyada. Tusaale ahaan, maareynta kumbuyuutarrada kumbuyuutarka ee iTunes, markii aan horay ugu sameyn jirnay Safari. Waxaan ku arki doonnaa duulimaadka haddii aad ka falcelisay.
Isla markii la soo degsado cusboonaysiinta, cusbooneysiin ka socota iTunes gaar ahaan nooca 12.7.1. Xaaladdan oo kale, Apple ayaa "sifeeyay oo wax yeeshay" arjiga, hagaajinta cayayaanka iyo hagaajinta waxqabadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » MacOS 10.13.1 hadda waa la heli karaa, sidoo kale iTunes 12.7.1 oo ku yaal Mac App Store
tvOS 11.1 sidoo kale waxaa loo heli karaa Apple TV